Lithini igama lokugqibela elithi Holmes?
I-Holmes yintsimi yendawo okanye yezobuqhetseba ukusuka kwintshona ye-English holm , esithetha "isiqithi," edlalwa umntu ohlala kwisiqithi, okanye isiqwenga samahlathi aphantsi okanye ajikelezwe ngamanzi.
Kwakhona, igama lomntu othile owayehlala kufuphi nalapho imithi ekhulayo ikhula, ukusuka kwiNgesi yesiNgesi.
I-Holmes ngamanye amaxesha ingabakho inguqulelo yesiNgesi, i- Mac ne-Thomáis , esithetha "unyana kaTomas."
Igama elithile Igama lokuchazwa : I- HOLME, ABANTU, IKHAYA, I-HOLM, I-HOLMS, AMAHOMO, I-HOOME, I-HOOMES, I-HULME
Abantu abaPhezulu abanegama elibizwa ngokuba ngu-HOLMES
U-Oliver Wendell Holmes, uJr. - iMelika yeMfazwe yaseMelika kunye noBulungisa beNkundla ePhakamileyo yase-US
U-Santonio Holmes - Umdlali webhola we-American NFL
Kate Noelle "Katie" Holmes - umdlali waseMerika kunye nomzekelo
UEdwin Holmes - Umvelisi waseMerika we-alarm alarm
UMatthew Holmes - oyinjiniyela engumatshini we-North British Railway
Kuphi abantu abaneSHLIMI igama?
Inombolo yeHolmes ixhaphake kakhulu eUnited States, ngokubhekiselele kwidatha yokusabalalisa igama lomhlaba kwi-Forebears, isasazwa ngokuthe ngqo kulo hlanga, nangona iphakamileyo kakhulu eMississippi neSithili sase-Columbia. I-Holmes iyaxhaphaka kakhulu, nangona kunjalo, eNgilani isekelwe kwipesenteji yabemi esithatha isibongo, kwaye iqheleke kakhulu eDerbyshire, apho i-12, ilandelwa yiLincolnshire (20th), Yorkshire (25), i-Nottinghamshire (26th) ne-Westmorland (36 ).
Iinkcukacha ezivela kwiWorldNames PublicProfiler zihluke kwi-Forebears, zibeka iHolmes njengezona ziqhelekileyo e-United Kingdom, zilandelwa yi-Australia, iNew Zealand kunye ne-US E-UK, i-Holmes ixhaphake kakhulu eNgilani, ngakumbi izithili zaseYorkshire ne-Humberside kunye ne-East Midlands
Izibonelelo zoGenesalogy for the Name Igama le-HOLMES
Holmes Crest Family - Akusikho Oko Ucinga
Ngokuchasene noko ungayiva, akukho nto enjengokwentsapho yaseHolmes okanye iingubo zeengalo kwiferensi yeHolmes.
Iprojekthi ye-Holmes Y-Chromosome yeDNA yegama
Injongo yeProjekthi yegama le-HOLMES Project ukuhlukanisa phakathi kwe-HOLMES imigca yamadala, emhlabeni wonke, ngokusebenzisa uphando lwembali lwentsapho kunye nolwazi lwe-DNA. Naluphi na umfana onobumba be-Holmes, okanye iindidi ezifana neHolme, Holmes, iHolms, iKhaya, iiHome, iHome, i-Homes, i-Hulme, i-Hume, i-Humes yamkelekile ukujoyina.
IsiGrike yoNyana 101
Funda indlela yokuphanda ookhokho bakho baseNgesi ngesi sikhokelo sokuqala kwiirekhodi kunye nezibonelelo zase-England nase-United Kingdom. Ubandakanya ukuzalwa kwaseBrithani, umtshato, ukufa, ubalo lwabantu, iingxelo zonqulo, zemikhosi kunye nokuthunyelwa kwamanye amazwe kunye nokuthanda.
INTSHOLONGWANE Yenkundla yoLuntu lweNzala
Ibhodi lemiyalezo yamahhala igxile kwiinzala zikaHolmes ookhokho emhlabeni jikelele.
I-FamilySearch - I-HOLMES Genealogy
Ukufikelela ngaphezu kwezigidi ezi-4 zeengxelo zembali zamahhala kunye nemithi yentsapho edibeneyo yomgca eposwe kwiferensi yeHolmes kunye neenguqu zayo kwiwebhusayithi yezahlulo eziphathekayo ebanjwe yiCawa likaYesu Kristu we-Saints-Day Saints.
Igama leSHLIMI Igama loLuhlu lweeNcwadi
Uluhlu lwamahhala e-RootsWeb uluhlu lwabaphandi beferensi yeHolmes kunye nokuhluka kwawo kubandakanya iinkcukacha zokubhaliselwa kunye neengxelo ezigcinwayo ezifundwayo kwimilayezo edlulileyo.
Hlola ii-database zolwazi zamahhala kunye neefayili zodidi lwegama lokugqibela igama elithi Holmes.
I-Holmes Genealogy and Family Tree Page
Dlulisa amehlo kwimithi yentsapho kunye neengqungquthela kwiirekhodi zomthonyama kunye neembali zabantu ngabanye abanegama lokugqibela elithi Holmes kwi-website yeGenesalogy Today.
I-BARNES igama elithi Origin and Origin
Indlela yokwakha ibhokisi ye-Skateboard Grind Box
Inkqubo yehlathi leNkcazo
Icandelo leMicroscope Printable
Imfazwe ye-Mahdist: iMfazwe yase-Omdurman